Karajia under attack | Hery - Tsiky dia ampy |
Karajia under attack
2011-02-23 @ 17:16 in Serasera.org
Niharan'ny fanafihana mahery vaika (lol) tato ho ato ny serveur irc-n'ny karajia.org. Mikolay daholo ny ankizy rehefa tena raikitra ilay izy. Eny e, tsy dia tena mahery vaika manao ahoana fa manelingelina fotsiny. Ary raha ny tokony ho izy ary dia tsy tokony hiseho akory ilay izy... fa izany hoe nisy.
Tsy tokony hiseho satria serveur privé ny karajia.org, tsy dia misy hoe olona hafa avy any ivelany mampiasa. Ny efitra ao dia ny an'ny serasera ny ankamaroany. Olona fantatra daholo na mifankahafantatra daholo (virtuellement) no tena ao. Noho izany tsy dia misy handany ron-doha hanafika ao satria tsy misy tombony. Izany rahateo no tsy nandaniako ron-doha hiaro be loatra an'ilay serveur. Mandany ressources sy fotoana fotsiny kanefa tsy hisy hanafika akory. Eritrereto hoe mipetraka any ambanivohitra lavitra andriana ianao, ianao sy ny fianakavianao irery no eo amin'ny tanàna... tsy manana harem-be sy ny sisa... dia matetika tsy manidy trano. Toa izany no niheverako ny karajia.org
Tato ho ato anefa dia tonga ny mpamosavy malemy. Ny ao antrano ihany no asiana. Araka io nolazaiko eo ambony io dia tsy olona avy any ivelany fa tsy maintsy izahay samy izahay ao ihany. Mampiasa izao fitaovana rehetra (andaniana vola mihitsy) hanafihana ny réseau karajia.org. Betsaka ny karazana attaque ataony amin'izany, flood, cycling, CTCP flooding any amin'ny mpitsaty hafa. Misy ny ankizy izay tsy tapaka matetika satria tonga dia mitobaka be ny tosaka alefany dia tapaka ny fifandraisana. Mamorona canal manokana mihitsy dia izy irery no mi-flood ao mba handavoana ny serveur.
Androany ary dia tafaresaka izahay roalahy (sa mianadahy satria tsy hay na lahy izy na vavy). Dia fanadrohadroana an-kolaka moa no nataony voalohany, toa ny hoe "reraka ve" sy ny hoe "hosakanana koa izany ity". Izaho kosa nanontany ny tena anton'ilay fanakorontanana. Nolazainy tamin'izany fa manandrana sy mianatra izy. Dia eto amin'ny serasera no mampiasa izay kely hainy. Dia nijanona tamin'ny "hahaha" sy ny "mdr" moa ny resaka nifanaovanay. Izaho rahateo amin'io sady miezaka misakana ny zavatra ataony atsy ambadika ihany.
Koa androany izany dia lany indray ny tapakandro hariva nametrahana tao amin'ny karajia.org ireo fiarovana rehetra tokony atao amin'ny reseau lehibe... na dia tsy lehibe aza ny karajia.org... vokatry ny nataon'olona iray. Manampy ahy hianatra be be kokoa koa izay... Tsiky dia ampy fa nandany fotoana sy ron-doha fotsiny.
Miandry ny tohiny indray izany izao.